Ederede Michael Ray na Martech Zone |
Edemede site na Michael Ray
Star Wars na-akọwa Force dị ka ihe na-agafe n'ihe niile. Darth Vader gwara anyị ka anyị ghara ileda ya anya na Obi-Wan gwara Luke na ọ na-ejikọ ihe niile ọnụ. Na-ele anya na mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi, ọ bụ data na-ejikọta ihe niile, na-emetụta ihe okike, ndị na-ege ntị, ozi, oge na ihe ndị ọzọ. Ndị a bụ ihe mmụta ole na ole iji nyere gị aka ịmụta otu esi ebugharị ikike ahụ iji wulite mgbasa ozi siri ike karị. Ihe ọmụmụ 1: Lekwasị Anya Anya